Translation contests | English to Somali | 43 | ProZ.com
Annual ProZ.com translation contest: "Celebrations" » English to Somali
Yaa tuuranaya yaanyadaas calafka ah oo billaabatay kacaankii La Tomatina? Xaqiiqdu waxay tahay cidna ma oga. Waxaa laga yaabaa in uu ahaa fallaagada anti-Franco, ama damaashaad oo gacanta ka baxday. Iyadoo la tixgelinayo qormada ugu muhiimsan ee sheekada, intii lagu jirey damaashaadkii 1945 ee Los Gigantes (warqada la mala awaalay ee gaardiska boombalaha mâché), dadka deegaanka waxay masraxa u fiirinayeen si xasarad leh si ay u helaan dareenka. Waxay ku dheceen gaari khudaar oo u dhowaa waxayna billaabeen isku tuurista yaanyo bislaatay. Dad daawanayey oo aan shaqo ku laheyn ayaa soo galay ilaa ay goobta ka noqotay mid durba sii siyaadisa dagaalka gacan ka hadalka ee khudaarta duuleysa. Fitno abuurayaashii ayaa waxay ku qasabtay inay u gudaan dadkii yaanyada iibinayey, laakin taasi ma joojin soo noqnoqoshada hardanka yaanyada oo badan- iyo dhalashada caado cusub.
Cabsi laga qabo sii siyaadis aan la xukumi karin, xukuumada sharci ayey ka dhigtay, kadibna waxay dib u yagleeleen taxanayaal mamnuucis ah sanadkii 1950kii. Sanadkii 1951, dadkii deegaanka ee qaadacay sharciga waa la xabisay ilaa ay qeylo dhaan siideytooda ah kasoo yeertay dadweynaha. Shiixdarada ugu caansaneyd ee mamnuucida yaanyada waxay dhacday 1957 markii taageerayaasha qabteen aas ku qajalida yaanyada oo dhammeystiran oo la karfanay iyo taxaal socod. Kadib sanadkii 1957, dowlada hoose waxay go'aansatay dib u gurasho, waxayna dejisay dhowr shuruucyo, waxayna qaadatay caadada aan caadiga aheyn.
Inksatoo yaanyada ay qaadatay bartamaha masraxa oo dhan, damaashaadyo isbuuc ah ayaa u horseeday kalabax lagu kala haro. Waa dabaaldegii waliyayaasho rukunka ahaa ee Buñol, Virgin Mary iyo St. Louis Bertrand, oo gaardis wadada lagu marayo oo ay la jirto, muustiko, iyo bulleer ee casriga Spanish ee farxada leh. Si loo dhiso xoogaaga aad u hayso xasarada iman doonta, shicir, ammaan ayaa lagu qaadayaa maalinta hardanka., quraarad xiran oo bandhig cunooyinka saxanka 'ideysan Valencia oo bariis ah, cuntada badda, sacfraan, iyo saliid saytuun ah.
Maanta, Ciidan caqabad la'aanta ayaa waxay haysaa nidaam tallaabo leh. Abaabulayaasha waxay aadeen meel fog si ay u soo tabcaan yaanyo kaladuwan oo qaas ah oo aan macaaneen loogu talogalay keliya dhacdo sanadeedka. Damaashaadka waxay isku dabadheceysaa abaarihii 10 subaxnimo markii ay ka soo qeybgalayaasha orodada ay kalaboobaan hilib doofaan oo kor lagu soo dhejiyey ulo saliideysan. Daawadayaasha waxay ku waraabinayaan qasaayayaasha markay heesayaan oo ay qoob ka cayaar ku sameynayaan wadooyinka. Markuu gambaleelka kaniisada yeero duhuradii, gaari laga soo buuxiyey yaanyo ayaa ku wareegaya magaalada, isagoo ku qeylinaya "To-ma-te, to-ma-te!" markuu gaaro cod si tartiib tartiib ah kor u soo kaca.
Kadib, iyadoo la isku ridayo madaafic biyo ah, dhacdadii weyneyd ayaa billaabaneysa. Kaasi waa nal cagaaran oo loogu talogalay burburinta iyo billaabida weerarada yaanyada gaariga ku jirta in banaanka loo saaro ee lagala soo horjeedo kasoo qeybgalayaasha. Koru laadayaasha yaanyada ee masaafada dheer, dilaayaal bar-banaan ku jira, iyo qaanso toogasho oo dhexdhexaad ah. toogta. Si kastoy ahaato farsamada, markay dhammaato, waad fiirinaysaa, (oo waxaad dareemaysaa) in yar oo kala duwanaan ah. Ku dhawaad hal saac dambe, qaraxa yaanyo-qooyay loo daayaa inay ku ciyaaraan bad leh wado jilicsan oo qoyan oo salsa leh yar oo u eg yaanyo in laga helo. Madfac kale ayaa lagu la ridayaa oo ah siinyaalaha dhammaadka dagaalka.
Entry #18727 — Variant: Not specifiednone
Shiixdarada ugu caansaneyd ee mamnuucida yaanyada waxay dhacday 1957 markii taageerayaasha qabteen aas ku qajalida yaanyada oo dhammeystiran oo la karfanay iyo taxaal socod
1 user entered 24 "dislike" tags
Yaa tuuranaya yaanyadaas calafka ah oo billaabatay kacaankii La Tomatina?
Xaqiiqdu waxay tahay cidna ma oga
dadka deegaanka waxay masraxa u fiirinayeen si xasarad leh si ay u helaan dareenka
damaashaadyo isbuuc ah ayaa u horseeday kalabax lagu kala haro
Waa dabaaldegii waliyayaasho rukunka ahaa ee Buñol, Virgin Mary iyo St. Louis Bertrand, oo gaardis wadada lagu marayo oo ay la jirto, muustiko, iyo bulleer ee casriga Spanish ee farxada leh
quraarad xiran oo bandhig cunooyinka saxanka 'ideysan Valencia oo bariis ah, cuntada badda, sacfraan, iyo saliid saytuun ah
Maanta, Ciidan caqabad la'aanta ayaa waxay haysaa nidaam tallaabo leh
markii ay ka soo qeybgalayaasha orodada ay kalaboobaan hilib doofaan oo kor lagu soo dhejiyey ulo saliideysan
Daawadayaasha waxay ku waraabinayaan qasaayayaasha markay heesayaan oo ay qoob ka cayaar ku sameynayaan wadooyinka
isagoo ku qeylinaya
markuu gaaro cod si tartiib tartiib ah kor u soo kaca.
gaariga ku jirta in banaanka loo saaro ee lagala soo horjeedo kasoo qeybgalayaasha
Koru laadayaasha yaanyada ee masaafada dheer
dilaayaal bar-banaan ku jira
iyo qaanso toogasho oo dhexdhexaad ah
Si kastoy ahaato farsamada
in yar oo kala duwanaan ah
Ku dhawaad hal saac dambe
qaraxa yaanyo-qooyay loo daayaa inay ku ciyaaraan bad leh wado jilicsan oo qoyan oo salsa leh yar oo u eg yaanyo in laga helo
Madfac kale ayaa lagu la ridayaa oo ah siinyaalaha dhammaadka dagaalka
Ayaa tuuray tamaandhadii ugu horraysay ee taariikhda u gashay bilowgii kacaankii Tamaandhada? Xaqiiqadu waa cidina ma oga. Laga yaabaa inay ahayd kacdoon ka horjeeday Franco, ama damaashaad faraha ka baxay. Noocaca ugu caansan ee sheekadan ayaa ah, markay ahayd muddadii fantasiyihii Los Gigantes ee 1945 (dabbaaldeg lagu soo bandhigo babeet aad u weyn oo waraaq isku-fajaqan ah), ayay dadka deegaanka qaarkood xurguf yar bilaabeen si bal uun woxoogaa loogu soo jeedsado. Markaas ayay ku soo beegmeen gaadhi-gacmeed khudaar waday oo tamaandhada bislaatay isku shiidkeeda ay halkaa ka bilaabeen. Daawadayaal aan waxba kala-ogayn ayaa ka qayb galay illaa meeshu isku rogtay iska-horimaad tamandhadu wifta hayso. Kuwii fidnada bilaabay ayaa dib ugu celiyay lacagtooda ganacsatadii tamaandhada, Laakiin taasi ma joojin rogaal-celino badan oo dagaalldaas tamaandhada ahaa— iyo bilow dhaqan markaa cusbaa.
Iyaga oo ka baqayay arrimaha oo ka sii dara, ayay mammulladii jiray soo saareen, marna dabciyeen, haddana dib ugu soo rogeen mamnuucitaanno isdabajooga ah sannadihii 1950yihii. Gudihii 1951, ayaa dadkii deegaanka ee ku xadgudbay sharciga la xidhay illaa markay dadweynuhu ka dhiidhiyeen la sii daayay. U badheedhkii ugu caansana ee lagaga soo horjeeday mamnuuca tamaandhada ayaa dhacday 1957 markay taageerayaashu u soo dareereen aaska tamaandhada oo xitaa naxash lagu waday. Wixii ka dambeeyay 1957, ayay dowladda hoose go’aansatay inay is-daadraaciso, oo ay u dajiysay xeerar, soona dhawaysay dhaqankaas la yaabka lahaa.
In kasta oo tamaandhadu kaalinta ugu weyn ka qaadato, haddana toddobaad fantasiye lagu jiro ayaa iskugu soo biyo shubta iska hor-imaadka ugu dambeeya. Waa xusidda awliyada ilaalisa Buñol, ee ah Virgin Mary iyo St. Louis Bertrand, iyo isku-soo-baxyo waddada loo dareero, muusik, iyo damaashaad loo qabto qaab Isbaanish farxad iyo reyreyn leh. Si tamar loogu keydsado iska horimaadka soo dhow, ayaa la cunaa galabta maalinta ka horreysa dagaalka bariis isku dhex-karis ah oo loo yaqaan “paella”, lehna cunto badeed, sacfaraan iyo saliid saytuun, oo ku caan ah reer Valencia.
Fantasiyahan bilaa xakamaha ah ayaa waayadan woxoogaa nidaam ah leh. Qabanqaabiyeyaasha ayaa xitaa u beera oo ugu talagala nooc tamandho oo aan dhandhan fiican lahayn dhacdadan sannadlaha ah. Fantasiyaha ayaa bilaabma agagaaraha 10 g. h. markay ka qaybqaatayaashu kala boobaan haam korka kaga yaal udub dufan la mariyay. Daawadyaasha ayaa ku rusheeya biyo dadka buuqsan iyaga oo heesaya oo qob-ka-ciyaar ku sameynaya isla markaa jidadka. Markuu jalaska kaniisaddu garaaco duhurka, tarakyo ka buuxaan tamandho ayaa magaalada soo gala, iyo oo lagu nashiidada "To-ma-te, to-ma-te!" cirka isku shareerto.
Markaa, iyada oo la rido madfac biyo ah, ayay xafladda ugu muhiimsani bilaabantaa. Waa markaa marka la oggol yahay bilowga bururinta iyo ganidda tamaandhada iyo weeraro aan loola kala-hadhin oo lagu hujuumo ka qaybgalayaasha kale. Kuwa sida leebka korka kaga keena, iyo kuwa shiishka badan iyo kuwa meel-dhexaadka hoosta uga dhiibaba ha ahaadeene. Siday doonto xeeladdaadu ha noqotee, markay wax kasta soo gabgaboobaan, waxaad u ekaan doontaa (oo aad dareemi doontaa) qof sidii hore ka duwan. In ku dhow hal saac kaddib, dagaaliyahannada ay tamaandhadu radisay ayaa iskugu soo hadha waddo aad moodo bad ku dhooqowday shigni cas oo haba yaraatee wax tamandho u eg aan lagu arkin. Madfac labaad oo la rido ayaa markaa calaamad u ah dhammaadka dagaalka.
Entry #17014 — Variant: Not specifiednone
1 user entered 21 "dislike" tags
Ayaa tuuray tamaandhadii ugu horraysay ee taariikhda u gashay bilowgii kacaankii Tamaandhada?
Noocaca ugu caansan ee sheekadan ayaa ah,
markay ahayd muddadii fantasiyihii Los Gigantes ee 1945 (dabbaaldeg lagu soo bandhigo babeet aad u weyn oo waraaq isku-fajaqan ah)
ayay dadka deegaanka qaarkood xurguf yar bilaabeen si bal uun woxoogaa loogu soo jeedsado
haddana toddobaad fantasiye lagu jiro ayaa iskugu soo biyo shubta iska hor-imaadka ugu dambeeya
Waa xusidda awliyada ilaalisa Buñol, ee ah Virgin Mary iyo St. Louis Bertrand, iyo isku-soo-baxyo waddada loo dareero, muusik, iyo damaashaad loo qabto qaab Isbaanish farxad iyo reyreyn leh
Qabanqaabiyeyaasha ayaa xitaa u beera oo ugu talagala nooc tamandho oo aan dhandhan fiican lahayn dhacdadan sannadlaha ah
markay ka qaybqaatayaashu kala boobaan haam korka kaga yaal udub dufan la mariyay
Daawadyaasha ayaa ku rusheeya biyo dadka buuqsan iyaga oo heesaya oo qob-ka-ciyaar ku sameynaya isla markaa jidadka
Markuu jalaska kaniisaddu garaaco duhurka
iyo oo lagu nashiidada
Waa markaa marka la oggol yahay bilowga bururinta iyo ganidda tamaandhada iyo weeraro aan loola kala-hadhin oo lagu hujuumo ka qaybgalayaasha kale
Kuwa sida leebka korka kaga keena
iyo kuwa shiishka badan iyo kuwa meel-dhexaadka hoosta uga dhiibaba ha ahaadeene
Siday doonto xeeladdaadu ha noqotee
waxaad u ekaan doontaa
qof sidii hore ka duwan
In ku dhow hal saac kaddib
dagaaliyahannada ay tamaandhadu radisay ayaa iskugu soo hadha waddo aad moodo bad ku dhooqowday shigni cas oo haba yaraatee wax tamandho u eg aan lagu arkin
Madfac labaad oo la rido ayaa markaa calaamad u ah dhammaadka dagaalka
Yaa xoogaas u tuuray yaanyadaas fiican oo bilaabay kacaanka damaashaadka yaanyada? Runta waa qofna ma oga. Waxay ilatahay inay aheyd falaagooyinka kacaankii Franco, ama dabaaldag gacanta ka baxay. Sida laga soo xigtay sheekada kuwa loogu jacelyahay, xiliga lagu guda jiray 1945 tii dabaaldaga Loos Jaygaantes (Los Gigantes ee kolonyada boombalaha ugu muhiimsan), deegaankii waxay daawanayeen marxalada dagaalka ku weynaado. Waxay ku dhaceen dusha gaarigacan qudaar dhinaciisa iyo waxaa bilaabatay kala orodka yaanyadii kartay. Daawadayaasha dambi laawaha ahaa ayaa soo dhaxgalay ilaa goobtii ay isku badashay qeylo weyn oo mirro buubaayo. Fidno oogayaashii waa inay dib u bixiyaan lacagta yaanyo iibiyaha, laakin taas ma istaajinin isku dhacyada soo noqnoqnayo ee yaanyada badan—iyo dhalashada dhaqan cusub.
Cabsida falaagada weynaaneyso, maamulka dhaqangeliyay, nastay, iyo kadibna soo celiyay mamnuuca taxanaha ah dhexdii 1950 meeyadii. Dhexdii 1951 dii, deegaanka kuwa jabiyay sharciga waa la xeray ilaa mudaaharaadka bulshada ay ugu yeeraan siideyntooda. Xushmad la'aanta ugu caansanaa ee mamnuuca yaanyada waxay dhacday 1957 goortii udoodayaasha ay u qabteen matalaada tacsida yaanyada oo lagu dhamystiro sanduuqa meedka iyo kooxda tacsida. 1957 kadib, dawlada hoose waxay go'aansatay inay duubaan xermooyin, dhoor sharciyo meel ku habeeyen, iyo isku duubeen dhaqankii aan caadiga aheyn.
Inkastoo xarunta masraxa yaanyada laga qaado, hal isbuuc oo dabaal dag ah uu socday ilaa tusmada hoose ee ugu dambeysay. Waa dabaaldaga sheeqa deeq bixiyaha magaalada Buñol, Wadada Fijin iyo Meeri (Virgin Mary and St). oo wadooyinka kolonyada leh, muusiko, iyo shaqadadabka ee faashinka farxada Isbaanishka (Spanish). Dhisida awoodaada dagaalka dhaqsida dhaco, saxan raashiin oo weyn ayaa la siiyay farxada dagaalka, soo bandhigayo saxan bariis cajiib ah ee Falensiyaan (Valencian), cuntadabadda, xawaaji, iyo saliida miraha.
Maanta, dabaaldagaan xurta ah waxay leedahay amaro qiyaasan. Qabanqaabiyayaasha waxay sameeyeen ilaa hadeer sida diyaarinta yaanyada aan adkeyn ee gaarka kaladuwan ah oo loogu talagalay dhacdada sanadlaha ah. Dabaaldagyada waxay bilaawdeen 10 ka subax nimo. markay ka soo qeybgalayaasha ay ku tartameen inay soo qabsadaan hilib diyaarsan oo dulsaaran gabalo cadiin ah. Daawadayaasha waxay ku yeerinayeen tubada iyo biyo ayagoo heesayo iyo ku cayaarayo wadooyinka Goortii gambaleelka kaniisada uu yeero galabtii, baabuurta ku raseynsan yaanyada waxay aadaan magaalada, ayagoo ku heesayo, ''Ya-an-yo, ya-an-yo!'' gaaray qaylo.
Kadibna, ay lajiraan toogashada biyaha qoriga weyn, dhacdada ugu muhiimsan way bilaabatay. Taasi waa nalka cagaaran oo ah burburinta iyo bilaabista yaanyada oo weeraro ka dhacay ka qeybgalayaasha oo dhan. Masaafo dheer oo guusha yaanyada ah, ku aadi dilka meel maran, iyo dhaxdhaxaadka darbada birta kala duwan Waxwalbo oo farsamadaada tahay, marka ay dhamaato, waxaad u ekaaneysaa (iyo dareemeysaa) isbadal weyn. Ku dhawaadkii, saacad kadib, qarciyaasha yaanyada-qoyan ayaa lagu reebaa si loogu ciyaaro bada laysku keenay iyo ciyaarta wadada oo ay lajiraan haraa yar oo yaanyo isu eg ayaa laga helaa. Toogashada madfaca labaad waxuu bilaabanayaa dhamaadka dagaalka.
Entry #17245 — Variant: Not specifiednone
Yaa xoogaas u tuuray yaanyadaas fiican oo bilaabay kacaanka damaashaadka yaanyada?
Cabsida falaagada weynaaneyso, maamulka dhaqangeliyay, nastay, iyo kadibna soo celiyay mamnuuca taxanaha ah dhexdii 1950 meeyadii.
Yaa ku tuureen in yaanyo marka hore idinku dardaarayaa in ay bilaabeen ka kacaan La Tomatina? Xaqiiqada waa ninna waxba kama oga. Yaabaa in uu ahaa an kasoo horjeesashada-Franco, ama damaashaad in saari gacanta. Sida ay version ugu sheekada, inta lagu guda jiro 1945 festival ee Los Gigantes (dabaaldega waxay Rafaa mâché warqad puppet), maxalliga ah ayaa eegaya waan tooba Sheeko Gaaban si aad u hesho dareenka qaar ka mid ah. Waxay gaadhi khudradda a dhacay dhow iyo bilaabay hurling yaanyada bislaado. Dayi Innocent helay lug ilaa iyo goobta Mararna melee a weyn oo miro duulaya. Fidna The lahaa inuu dib u bixiyo waratada Tamaandhada, laakiin aan istaagayn soo noq of more yaanyo dagaallan-iyo dhalashada caado cusub.
Sidaa daradeed waa meel mariyay qorshe lagu dacwaynin, maamulka meelmariyey, dabacsan, ka dibna ay daneenayso taxane ah oo mamnuuc ka dhigeen in 1950. In 1951, dadka deegaanka, sharciga, kuwaas oo ku cayday xabsi ilaa xawkiisa loo yaqaan ay sii daayo. Talinweydeen The ugu caansan si mamnuucida Tamaandhada ku dhacday 1957 markii uu xabki qabtay aaska jilitaan ah yaanyo dhamaystiran oo leh sanduuq iyo isdaba socdo. Ka dib 1957, dawladda hoose go'aansatay in ay ula punches u jiidid, dhigay a xeerar yar oo meel, iyo isku duubay caado ka somaanta.
In kastoo Tamaandhada ku qaadan marxalad xarunta, toddobaadkii of xaflado keeni ilaa wajahaya kama dambaysta ah. Waa xaflad quduusiinta isagaa u Buñol ee, Maryan oo bikrad ah iyo St Louis Bertrand, kula socod oo wadada, music, iyo rashka ee fashion Isbaanish farxadda. Si aad dhistid oo aad xoog jumlo gutaan, paella Tacaddi u adeegayso on Eve dagaalka ugu, soona bandhigaya ah saxanka 'ideysan Valencia oo bariis ah, cuntada badda, sacfraan, iyo saliid saytuun ah.
Maanta, this iid si caqabad la'aan leedahay oo qiyaas qaar ka mid ah si. Ururka ay aadeen ilaa hadda sida ay u beeri kala duwan oo gaar ah oo yaanyo saxo loogu talagalay oo keliya ay dhacdo sannadlaha ah. Xaflado ah kaambeyn 10 am marka ka qayb jinsiyada si loo soo dhufsan ham go'an halak cirif ah dufan. Dayi tuubada scramblers biyo halka heesaya iyo cayaar jidadka. Marka Dawan oo kaniisadda ku dila duhurnimo, in Road yaanyo laga rogo magaalada soo galay, halka SAHAN oo "Si-ma-te, si-ma-te!" crescendo a gaaraan.
Markaas, cayriyey of madfac biyo ah, dhacdada ugu weyn ee bilaabmaa. Taasi waa iftiinka cagaaran lagu burburiyo bilaabay yaanyada in weeraro dhan-ka soo horjeeda ka qayb galayaasha la shaqayn jiray. Lobbers masaafo dheer yaanyo, dhiigleyaal bar-bannaan, oo darbo jillaab kala duwan oo dhexdhexaad ah. Wax kasta oo aad farsamada, by waqtiga waxa ka weyn, waxa aad eegi doonaa (iyo dareemaan) ka duwan tahay. Ku dhawaad ​​hal saac dambe, qaraxa yaanyo-qooyay loo daayaa inay ka ciyaaraan badda ah salsa wadada squishy leh bidix yar oo u eg yaanyo ah in laga helo. A shot madfac labaad seenyaale dhamaadka dagaalka.
Entry #17750 — Variant: Not specifiednone
Xaqiiqada waa ninna waxba kama oga
1 user entered 29 "dislike" tags
Yaa ku tuureen in yaanyo marka hore idinku dardaarayaa in ay bilaabeen ka kacaan La Tomatina?
Yaabaa in uu ahaa an kasoo horjeesashada-Franco
ama damaashaad in saari gacanta
Sida ay version ugu sheekada, inta lagu guda jiro 1945 festival ee Los Gigantes (dabaaldega waxay Rafaa mâché warqad puppet),
maxalliga ah ayaa eegaya waan tooba Sheeko Gaaban si aad u hesho dareenka qaar ka mid ah
Waxay gaadhi khudradda a dhacay dhow iyo bilaabay hurling yaanyada bislaado
Dayi Innocent helay lug ilaa iyo goobta Mararna melee a weyn oo miro duulaya
Fidna The lahaa inuu dib u bixiyo waratada Tamaandhada, laakiin aan istaagayn soo noq of more yaanyo dagaallan-iyo dhalashada caado cusub
Sidaa daradeed waa meel mariyay qorshe lagu dacwaynin, maamulka meelmariyey, dabacsan, ka dibna ay daneenayso taxane ah oo mamnuuc ka dhigeen in 1950
In 1951, dadka deegaanka, sharciga, kuwaas oo ku cayday xabsi ilaa xawkiisa loo yaqaan ay sii daayo
Talinweydeen The ugu caansan si mamnuucida Tamaandhada ku dhacday 1957 markii uu xabki qabtay aaska jilitaan ah yaanyo dhamaystiran oo leh sanduuq iyo isdaba socdo. Ka dib 1957
dawladda hoose go'aansatay in ay ula punches u jiidid, dhigay a xeerar yar oo meel, iyo isku duubay caado ka somaanta.
In kastoo Tamaandhada ku qaadan marxalad xarunta, toddobaadkii of xaflado keeni ilaa wajahaya kama dambaysta ah
Waa xaflad quduusiinta isagaa u Buñol ee, Maryan oo bikrad ah iyo St Louis Bertrand, kula socod oo wadada, music, iyo rashka ee fashion Isbaanish farxadda.
Si aad dhistid oo aad xoog jumlo gutaan, paella Tacaddi u adeegayso on Eve dagaalka ugu, soona bandhigaya ah saxanka 'ideysan Valencia oo bariis ah, cuntada badda, sacfraan, iyo saliid saytuun ah
Maanta, this iid si caqabad la'aan leedahay oo qiyaas qaar ka mid ah si
Ururka ay aadeen ilaa hadda sida ay u beeri kala duwan oo gaar ah oo yaanyo saxo loogu talagalay oo keliya ay dhacdo sannadlaha ah
Xaflado ah kaambeyn 10 am marka ka qayb jinsiyada si loo soo dhufsan ham go'an halak cirif ah dufan. Dayi tuubada scramblers biyo halka heesaya iyo cayaar jidadka
Marka Dawan oo kaniisadda ku dila duhurnimo, in Road yaanyo laga rogo magaalada soo galay, halka SAHAN oo "Si-ma-te, si-ma-te!" crescendo a gaaraan
Markaas, cayriyey of madfac biyo ah, dhacdada ugu weyn ee bilaabmaa.
Taasi waa iftiinka cagaaran lagu burburiyo bilaabay yaanyada in weeraro dhan-ka soo horjeeda ka qayb galayaasha la shaqayn jiray
Lobbers masaafo dheer yaanyo
oo darbo jillaab kala duwan oo dhexdhexaad ah
Wax kasta oo aad farsamada
by waqtiga waxa ka weyn
waxa aad eegi doonaa (iyo dareemaan) ka duwan tahay
Ku dhawaad ​​hal saac dambe
qaraxa yaanyo-qooyay loo daayaa inay ka ciyaaraan badda ah salsa wadada squishy leh bidix yar oo u eg yaanyo ah in laga helo. A shot madfac labaad seenyaale dhamaadka dagaalka
This trans​lation loo​ks it been​ used mach​ine transa​ltion sinc​e there is​ many word​s in Engli​sh as well​ mistransl​ation and ​errors